How kuita bvunzo Yakachena:
Maneuverability -Here tinotarisa sei zviri nyore kwokunangisa, dhonzai uye kusimudza muchina. Tingaedza pamusoro nemakapeti uye dzakaoma uriri uye kutsvaka matambudziko akadai overbalancing pamusoro vakarurama michina, mukana wokushandiswa uye zvakajairika nyaya se "isanamira" misoro iri rakaoma Uriri nokuda havaratidzi yakagadzirwa yakachena misoro.
Carpet kuchenesa - We bvunzo kushandisa chena upfu pamusoro kwasviba nemakapeti uye bvunzo pashure kuchavazvuzvurudzira matatu, apo mumwe kutsvaira Zviri uye pasi mhiri nzvimbo.
Edge kuchenesa - bvunzo iyi anotarira sei tsime muchina inochenesa kusvika kumucheto skirting mapuranga usati kushandisa nyanzvi crevice Ezvemutauro.
Hard uriri kuchenesa - We kuitisa nemiedzo yakafanana iri rakaoma Uriri uye kutarisa sei tsime racho vacuum sucks guruva kubva crevices uye Makwanza mu flooring.
Pet bvudzi kuchenesa - rakareba sei kuchavazvuzvurudzira zhinji Zvinoda kugeza 40cm-dhayamita yakaurungana combed-mu dzinovaraidza bvudzi.
Rokuchenesa pamusoro masitepisi - We kuona sei zviri nyore kuchenesa pamusoro masitepisi uchishandisa zvokushandisa yakapiwa. Tinobhadhara pfungwa nyore sei refu patsanurika hosipaipi uye sei zviri kutakura vacuum kana unofanira.
Ruzha - We kuyera sei ruzha muchina riri decibels pana musoro pamwero.
Tinoratidzawo kuti vaone chii nenhumbi vanobatanidzwa, sei zvakanaka vanoshanda uye sei kuita zvinhu zvizhinji muchina iri. Somuenzaniso, vamwe vacuüm cleaners zvakanaka mabasa chaiwo, nepo vamwe vane mijenya zvekushandisa kuti vave yakazaruka kuna mamwe-siyana.
Other mashoko tiongorore zvinosanganisira tambo yakareba pamusoro akasungwa vacuüm cleaners, kuti bhatiri upenyu pamusoro cordless mienzaniso uye sei zviri nyore zviri bagless yokutevedzera.
Kana muine mibvunzo, Tapota taura: 86 574 63932251
Nyore kuwana nesu.
Get nhau, kuunganidza uye inopa wakaisa ngaatarire kuna inbox yenyu. Inquiry For Pricelist